Uqasho lwezithuthi ngexabiso eliphantsi Umtata (Mthatha) Airport
Uqashiso lwezithuthi Umtata (Mthatha) Airport
Ukubhukisha isithuthi e Umtata (Mthatha) Airport kuyakhawuleza kwaye kulula ngo Just Car Hire. Sinikeza ngamaxabiso amahle okuqashisa ngesithuthi e Umtata (Mthatha) Airport, oku kuxhaswa sisithembiso sethu sexabiso elihle. Khetha Umtata (Mthatha) Airport kumasebe amaninzi naba niki-zithuthi abakhoyo.
QAPHELA: le nkcukacha ivezwa ngezantsi ngeyakutsha nje esiyinikiweyo, kwaye oku kuzokuqinisekiswa kwi ngqinisekiso yokubhukisha kwakho
Hertz Ukuqasha isithuthi Umtata (Mthatha) Airport
Umtata (Mthatha) Airport
Mvulo - Lwesine:
Iholide kazwe lonke:
Europcar Ukuqasha isithuthi Umtata (Mthatha) Airport
Firefly Ukuqasha isithuthi Umtata (Mthatha) Airport
Jonga amaxabiso nokubakho kwesithuthi
Fumana elona xabiso lihle lokuqesha isithuthi
Uzokuphuma ngaphandle koMzantsi Afrika?
THELEKISA AMAXABISO OKUQESHA ISITHUTHI
Amaxabiso amahle okuqasha isithuthi - siyakuqinisekisa
Ukuqasha isithuthi Umtata (Mthatha) Airport - iingcaphephe usukela ngo 2003
Ngapha kwe 60 000+ yezithuthi ezisezi bhukishiwe
Khangela msinya; Bidvest, Thrifty, Europcar, Tempest, Hertz, First no Cabs
Amasebe angaphezulu kwe 260, akufuphi kunam
Khetha uqalela kwizithuthi eziqhelekileyo nezifikelelekayo e Umtata (Mthatha) Airport ukuya kwezintomfontomfo
Uqasho lwezithuthi ngelona xabiso liphantsi e Umtata (Mthatha) Airport ezine mileage engenamkhawulo kunye ne excess ephantsi
Isiqinisekiso selona xabiso lihle
Yakha ubudlelwane nathi
Intlobo lwesithuthi kunye nee Modeli
Iindawo kunye namasebe
Olunye uqashiso lwezithuthi
Uqashiso lwe 4x4